Farqiga u dhaxeeya nolosha ardayga ee Dugsiga sare iyo Jaamacadda.
Sidaa ognahay nolosha ardayga ee Dugsiga sare iyo mida Jaamacadda ma aha mid farqi badan u dhexeeyo, lakiin su’aasho waa qaabkee isku barbardhigi karnaa labadaan nolol ee ardayga.
Caruurnimo ilaa iyo qaangaarnimo, Dugsi sare ardayga wuxuu ku noolaa riyo ah sida uu dareemi doono markuu qof weyn noqdo.
Dhinaca kale, Jaamacad waxay ardayga u samaxeesaa inuu si buuxda waqtigiisa u maareeyo, mas’uuliyad inuu isa saaro iyo go’aansado cida uu rabo inuu noqdo.
Hadii aad ku guulaysatid inaad dabo taagnaatid hadafkaaga Jaamacaddeed, side inaad si fiican ugu baastid maadooyinkaaga, ilaalinta jadwalka fasalada iyo la imaansho dadaal waxbarasho, horumar baad ka gaaraysaa waxbarashadaad Jaamacaddeed. Nolosha ardayga ee Jaamacad dheelitir ayaa muhiim ah, kaas oo ah in uu inta badan culeeska saaro waxbarashada, in yarna uu ku dhumiyo dhalinyareenta.
Hadii ay u muuqato nolasha ardayga ee Jaamacaddeed mid isxilqaam ah, run ahaantii waa tahay mid rabitaan ku saleesan.
Dugsi sare: Waad taqaan ardaykasta oo fasalka kula fadhiyo
Jaamacad: Labo ama sedex arday baad ka garanaysaa fasalka oo dhan
Dugsi sare: Waxaad toosaysaa aroortii si aad fasalada Dugsiga sare u aadid
Jaamacad: Xiliga xisada koowaad ayaad Jaamacadda tagaysaa (subax ama galab)
Dugsi sare: Waxaad ku qasban tahay inaad barato maadooyinka oo dhan
Jaamacad: Adiga ayaa dooranayo taqasuska iyo maadooyinkiisa
Hadii aad qabtid su’aal ama uu jirto wax fikir ah fadlan hoos nagu waydii.
Jama idle Aden
7/2/2016 06:20:11 pm
Asc waan idinsalaamay marka hore illahay baa mahadi usugnaatay
Waxaa jirta arday badan oo jamacadaha dalka waxkabarta kuwaasoo kasoo baxay dugsiyada sare badan kooduna waxay ku wareeraan sanadaha hore say udooran lahaa yeen kuliyaday dhiganlahaa waxaad arkaysaa arday iskumaraya dhamaan kiliyadaha jamacada qaarbaa dhacda uu SAA semesterkuba kudhaafo markaa maxaa xal aad uaragtaan oo aadnala wadaagi kartaan waad mahadsantihiin
Cabdi Shakuur Tahliil Xirsi
7/2/2016 06:22:42 pm
Ardayga wax barashadiisa ay ku egtahay dugsi sare maxa u sahli kara inuu noqdo waxa u dononayo inuu noqdo?
7/3/2016 12:02:42 am
Asc kawarn anoon dhigan dugsiga sare qayb kamid ah hadaan tago jaamacada ha dhow maxaa isoo wajihi kara bi'idnilaah?